Dhibcaha Lead iyo Software Aqoonsiga Lead
Isniin, Oktoobar 11, 2010 Axad, Oktoobar 19, 2014 Douglas Karr
Waxaan isku dayay inaan la qabsado saaxiibaday Xaqiiqda Isdhexgalka dhawr bilood hada… waxaa jiray gunuus dhamaan hareeraha warshadaha in waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay soo kordhiyeen ay yihiin kuwo layaableh. Andy Skirvin ayaa joojiyay xafiiska wuxuuna dhex maray madasha oo gabi ahaanba wuu i qarxiyay.
Ilaa iyo inta aan xasuusto, waxaan ku wacdin jiray in baraha bulshada ay yihiin kuwa wax u kordhiya suuqgeyntaada… waana in lagu daro istiraatiijiyad kaamil badan si looga faa'iideysto. Xuquuqda Interactive waxay dhistay barxad la yaab leh oo ka faa'iideysata xogta cajiibka ah ee warbaahinta bulshada ay bixiso, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhaliso rajooyin sida ku habboon, waxayna ku siinaysaa hanaan fudud oo loogu talagalay kala-soocidda iyo isgaarsiinta otomatiga ah ee rajooyinka gaarka u ah heerka iibsiga ee ay ku jiraan.
La-shaqeynta bulsheed ee rajada leh ee shirkaddaada ayaa noqon karta xiriirinta maqan ee aad u baahnayd si aad u dejiso waxyaabaha laga filayo halka ay ku jiraan wareegga wax iibsiga. Waxaa laga yaabaa inay booqdeen bartaada… laakiin diyaar uma ahayn inay iibsadaan weli. Warbaahinta bulshada, rukummada quudinta iyo iimaylku waxay bixiyaan habab rajada laga qabo inay xiriir joogto yeeshaan illaa ay diyaar u yihiin inay iibsadaan.
Markaad ilaaliso dhaqankooda… raac, jecel, tweets, retweets, check-ins media baraha bulshada ayaa kaa caawin kara u dhaqaaqida rajada talaabada xigta ee wareegga iibsiga. Awoodda loo leeyahay inaad bixiso waddo oo aad u dhaqaajiso rajooyinka marxalad kasta oo kobcin ah waxay si weyn u kordhineysaa tirada hoggaamiyeyaasha aqoonta u leh kooxdaada iibka la siiyay. Xuquuqda Macaamiisha Macaamilada leh ayaa leh afar jibbaaray hogaankooda u qalma iyaga oo isticmaalaya macaamiisha suuq geynta nolosha.
Dhibaatadu, dabcan, waa isu geynta iyo dhibcaha dhammaan waxyaabahaas! Xuquuqda Isdhexgalka ayaa tan ku sameysay isdhexgal xariif ah oo u oggolaanaya shirkaddaada inay ka faa'iideysato wixii jira CRM (ie, Iibinta) iyo gaar ahaan (ie, ExactTarget). Xogtaada ayaa la dubay, la dhaliyay, ololeyaalna kiciyay ayaa si otomaatig ah looga fuliyaa nidaamkooda.
Xuquuqda Dhibcaha Ka-Qaybgalka Is-dhexgalka
Xuquuqda Ololaha Isdhexgalka iyo Fulinta Xeeladaha
Shirkadaha badankood ma haystaan ​​ilaha looga baahan yahay inay si wax ku ool ah u kobciyaan ugana dhaqaaqaan macaamiisha dhuumahooda iibka… marka qayb yar oo ka mid ah qiimaha iibiyaha ama suuqleyda, barxadda ayaa macno samaynaysa.
Qeex heerarka iyo shuruudaha albaabka nolosha macaamiishaada.
Ku adkee "silos" badan kaydinta xogta xirfadeed ee suuq geynta.
Samee hannaan loogu talagalay suuqgeynta si nidaamsan loogu kobciyo hoggaamiyeyaasha iyo macaamiisha.
Bixi culeysyo iyo qiimeyn ku saabsan astaanta iyo kaqeybgalka.
Isku waafaji barnaamijyada suuqgeynta, ololeyaasha iyo xeeladaha ku saleysan "halka ay xiriirka ka joogaan".
Ka gudub qiyaasaha jilicsan oo cabbiro ROI.
Ku dar warbaahinta bulshada si loo xiro wareegga.
Xaqiiqda Isdhexgalka sidoo kale tusaalayaal macmiil ah ayaan ka soo siiyay shirkii ugu dambeeyay ee Xiriirinta:
Xirmooyinka Warbaahinta Bulshada